5 Eo an-toerana tsara indrindra Drinks hisotro ary miezaka In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Eo an-toerana tsara indrindra Drinks hisotro ary miezaka In Eoropa
Eoropa no tena tsara toerana fihaonana maro kolontsaina samy hafa - ary culinary fomba amam-panao. Firenena rehetra manana ny mampiavaka, izay mitaona ny mpitsidika tsara ho amin'ny tantara sy ny zavatra hafa rehetra izany manome. Ary ny any amin'ny tany sasany, izany dia midika ihany koa flavorful zava-pisotro!
Ireo izay mandeha any manaitaitra ny lanilaniny, ary manana mponina nankatoavin'ny mahafinaritra dia hahazo mitsidika ireo firenena. Ireto ny ambony 5 zava-pisotro tsara indrindra ao an-toerana mba hisotro ary miezaka any Eoropa:
1. Eo an-toerana tsara indrindra Drinks In Italia: Limoncello
Limoncello dia mahafinaritra Italiana namorona fa afaka mahita rehetra manerana izao tsara tarehy firenena. Na izany aza, raha te-hanandrana izany hazavana voasarimakirana toaka amin'ny endriny tsara indrindra, loha tsy mahazo manao Amalfi. Ery, eo amin'ny tsara tarehy Amalfi Coast, manao limoncello avy amin'ny voasarimakirana tsara indrindra amin'ny rehetra Italia. Ny fomba fahandro voalohany mahatonga io zava-pisotro toy ny manitra hanandrana lamonady izay kely ihany mamy. Na izany aza, sip izany miadana sy tsara, fa ny heriny dia afaka mandray anao tampoka.
[ny https://ww.youtube.com/watch?v = rR4qLmpJdh0
2. Bordeaux divay eo an-toerana tsara indrindra - Frantsa
Fa ny divay tia, iray amin'ireo zava-pisotro tsara indrindra ao an-toerana mba hanandrana any Eoropa dia azo antoka fa ho divay Bordeaux. Na dia malaza fanondranana frantsay, Azo antoka ny zava-nitranga ny divay tsara tarehy sample ity raha mbola any Bordeaux. Ny divay fitetezam-paritra dia lalana marina mba hijery ny faritra sy ny divay. Inona no more, ianao dia hianatra zavatra betsaka momba ny fanaovana ny divay, tsara tarehy chateaus, ary microclimates.
Raha tsapanao fa mitady in London nandritra ny vanin-taona mafana, fotsiny ianao dia tsy afaka miala tsy misy santionany Pimms Cup. I James Pimm no namorona ny zava-pisotro ao amin'ny tapaky ny 1800s, ka dia nanompo tao amin'ny kaopy lehibe fa ny izay nampindraminy ny anarany. Izany dia mamelombelona zava-pisotro izay Mitambatra fizzy lamonady sy Pimms No. 1, ary koa ny voankazo sy ny mint slices sprigs. tena matsiro, ary tonga lafatra ny mankafy antonony tsara ny hafanana amin'ny fahavaratra ny andro eo an-jaridaina toerana, Pimms Cup dia hatsarany ianao.
4. Drinks eo an-toerana tsara indrindra any Alemaina: schnapps
In Alemaina, Schnaps dia elo teny ho an'ny zava-pisotro toaka mahery izay afaka manana tsirony isan-karazany. Ohatra, afaka manana Tsirom Schnaps na anana iray mifototra. Na inona na inona izay fidinao, ianao dia manana ny zava-pisotro malaza ao an-toerana izay manoloana ny toe-tsaina Alemaina. Ny fitiavana an-toerana manana Schnaps rehefa lehibe, mavesatra sakafo, ny hery izay manampy amin'ny fandevonan-kanina. Noho izany rehefa any Alemaina, dia aza misalasala mihinana sy misotro ny!
5. Westvleteren Abbey eo an-toerana tsara indrindra Beer In Belzika
Belzika dia mitovy dika amin'ny labiera, angamba mihoatra noho Alemaina no. Fa amin'ny olona rehetra eo an-toerana ny mahagaga Belza labiera, misy izay mandondòna anao eny an-tongotrao. Abbey labiera, fantatra koa amin'ny hoe Trappists, tena malaza any Belzika, fa Westvleteren Abbey labiera no rarest iray. Mba hahazoana izany, tokony hamandrika azy amin'ny Abbey 60 andro mialoha. Na izany aza, dia mendrika ny olana.
Vonona ny mankafy ny zava-pisotro tsara indrindra ao an-toerana dia afaka manolotra Eoropa? Entana ny kitapo, manao ny drafitra, ary ny lohany hamonjena A Train ho Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila ny mahita Eoropa manontolo amin'ny fahazavana hafa!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Eo an-toerana tsara indrindra Drinks to Try any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com% - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#zava-pisotro #traveleurope Italia London travelbelgium travelfrance travelgermany traveltips